करमा तर मार्नेहरुमाथि कारवाही होस
कर प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा कर प्रणालीले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नहरु भएका छन् । तर, उच्च ओहोदाका कर्मचारीको गलत नियतले देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा पार्ने कामहरु समेत हुने गरेका छन् । भर्खरै मात्र कर फछ्र्यौट आयोगको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको छ ।
हरेक नागरिककले एक–एक गरेर तिरेको कर निहीत व्यक्तिलाई सुम्पने काम भएको छ । कर फछ्यौट आयोग ऐन–२०३३ ले कर तिर्नै नसक्ने कम्पनीलाई मात्र कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, डा. प्रकाशरण मतह अर्थमन्त्री रहेको बेला बने कर फछ्यौट आयोगले भने मालामाल अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम गरेको छ । कर छलीलाई अपराध नै मानिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने विना कुनै आधार कुनै कम्पनीलाई कर छुट दिनेहरु महा अपराधि हुन । कर फछ्यौट आयोगले २०७२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा कर फछ्यौटको नाममा राज्यको ढुकुटी निहित व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्न ठूलै संजालले काम गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, प्रतिवेदन बुझ्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा समेत शंकाको घेरामा परेका छन् । तर, यो प्रकणरमा सबैभन्दा बढी भूमिका डा. प्रकाशरण महतकै देखिन्छ । यो कुरा डा. महतको विगतले समेत पुष्टी गर्छ । विगतमा समेत अर्थमन्त्री हु“दा महतले खुल्ला अर्थतन्त्रको नाममा निहित व्यक्तिलाई पोष्न यस्ता आयोगहरु गठन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, २०७१ सालमा मात्र महत ब्रम्हलुट योजनामा सफल भएका हुन ।
कर फछ्यौट आयोगको बदनियत त पर्दाफास भयो नै । तर, सर्वोच्च अदालतको अुनुसन्धानमा भएको कमजोरी पनि सोचनिय विषय हो । अख्तियारले आधारहिन रुपमा छुट दिएको भन्दै आयोगका तीनै जना सदस्यलाई छानविको दायरामा राखेको छ । तर, अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा आयोगका तीन सदस्य माथि १० अर्ब २ करोड बिगो दाबी गरेको थियो । अख्तियारको यो दाबीलाई आधार मान्दा राजस्व मिनाहा गरिएको २० अर्ब ९८ करोड रुपैया“मध्ये १० अर्ब २ करोड रुपैया“माथि मात्रै अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । त्यसैले अख्तियारकै अनुसन्धानमा समेत समस्या हुनसक्ने समेत आशंका गर्न थालिएको छ । यसरी हेर्दा कतै करमा तर मार्नेहरुमाथि कारवाही त नहुने होइन ? सर्वत्र चासोको विषय भनेको छ ।